Rui Faria oo shaaciyay inuu banaynayo booskiisa Manchester United
Wednesday, January 23rd, 2019 - 21:41:23
Sunday May 13, 2018 - 13:37:57 in Wararka by Hussein Hadafow
Rui Faria oo 17 sano la shaqaynayay Jose Mourinho ayaa xaqiijiyay inuu booskiisa bannaynayo waxii xilli ciyaareedkan ka dambeeya.
Tababare xigeenka Man United kaasoo ahaa ninka uu sida wayn uu u aamisan yahay Jose Mourinho ayaa lala xiriirinayaa booska uu bannaynayo Arsen Wenger ee kooxda Arsenal sida ay warinaysa jariirada the Sun.
War rasmi ah oo kasoo baxay kooxda Manchester United laguna daabacay bogga kooxdaas ayaa lagu yiri .” Rui dhammaadka xilli ciyaareedkan wuu isaga tagayaa kooxda waxaannu u haynaa xushamad ballaaran waana sababta aan u texgelinayno dalabkiisa.
" 17 sano oo aan la shaqaynayay Jose wax badan ayaan ka kororsaday , waxaan ku fakaraaya inaan waqti la qaato qoyskayga ka hor inta aanan shaqo cusub qorshayn,” ayuu Yiri Faria.
• Mourinho ayaa isna kudaray : "17 sano ... oo aan kasoo shaqayna magaalooyinka Leiria, Porto, London, Milan, Madrid, London markale iyo Manchester. Tababar, safar ciyaro waxbarasho qosol iyowaxoogaa murugo ah Ardaydacaaqilka ah hadda waa qabiir guulo samayn kara